Sida loo tirtiro Chess.com App Account? | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Sida loo tirtiro Chess.com App Account?
Sida loo tirtiro Chess.com App Account?
Chess.com waa degelka iyo app ugu fiican ee lagu ciyaaro chess online shisheeyaha iyo asxaabta. Anagoo halkan joogna DroidMaze waxaan jecelnahay inaan la ciyaarno chess asxaabteena anagoo adeegsanayna Chess.com
Tartamo badan ayaa sidoo kale waxaa soo qabanqaabiyay chess.com halkaas oo xirfadlayaasha sida Magnus Carlson iyo Vishwanathan Anand ay ku ciyaaraan chess goobtan.
Haddii sababo qaar awgood aad rabto inaad tirtirto akoonka app-ka Chess.com ka dib raac tilmaantan si fiican oo waxaad awoodi doontaa inaad tirtirto akoonka abka Chess.com.
Tallaabada #1: Ku fur Chess.com App-ka taleefanka
Marka hore, ka fur Chess.com App-ka taleefankaaga Android.
Tallaabada #2: U gudub wax badan oo ku jira qaybta hoose
Kadib furitaanka chess.com app waxaad u baahan tahay inaad dooro badan ka raadiso liiska hoose.
Talaabada #3: Guji Xulashada Settings
Hoos ugu dhaadhac qayb ka badan si aad u hesho Settings doorasho oo guji qaybta Settings.
Talaabada #4: Guji Akoonka si aad u furto Settings Account
Gudaha bogga Settings waxaad u baahan tahay inaad gujiso Akoonka si aad u furto goobaha akoontada si aad u tirtirto akoontiga app-ka chess.com.
Talaabada #5: Guji xidhidhiyaha akoontiga
Bogga Dejinta Koontada waxaad u baahan tahay inaad gujiso "ku dhufo halkan" isku xirka hore ee akoonka dhow si aad u furto xiriiriyaha akoontiga dhow oo aad doorato browserka aad jeceshahay.
Talaabada #6: Guji Xiritaanka Akoonka ee bogga shabakada
Hadda, guji Xir ikhtiyaarka akoontiga ee bogga shabakadda oo dooro sabab ka dibna dhagsii badhanka Xiritaanka akoontiga
Waxaad si guul leh u tirtirtay Xisaabta App-ka Chess.com
Amazon waxay u isticmaashaa xogteeda si ay u wiiqdo iibiyeyaasha dhinac saddexaad, ficilka antitrust EU ayaa leh
Sida Loo Abuuro Ololaha Crowdfunding Crowdfunding ee Mareegtaada